संसदमा पुराना गाडी थन्काएर नयाँ किनिदै, कसलाई कति महंगो ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
संसदमा पुराना गाडी थन्काएर नयाँ किनिदै, कसलाई कति महंगो ?
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिलाई महँगा गाडी किन्न सरकारसँग करोडौं रकम मागेको छ। चढिरहेका गाडी पुराना भएको भन्दै उसले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट मागको प्रस्ताव पठाएको हो। सचिवालयले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम मागी गाडी, मोटरसाइकल र कम्युटर खरिद गर्न लागेको हो। नयाँ गाडी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालका लागि किन्न लागेको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयले फर्निसिङ, सोफा, टेलिभिजन, कम्युटरलगायतका व्यवस्था गरेर समिति सभापतिका कार्यकक्ष तयारीमा करोडौं खर्च गरे पनि कतिपयले चित्त नबुझेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। सभापतिहरूको गुनासो बढ्दै गएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार समिति सभापतिरुका नयाँ कार्यकक्षको अवलोकन गरेका थिए। सभापतिहरूको कार्यकक्ष बनाउने काम लगभग सकिएको र केही सभापतिका गुनासा सम्बोधन हुने क्रम पनि चलिरहेको सभामुख महराले जनाए। अन्नपूर्णपोष्टबाट